Ester 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
6 Saa anadwo no, ɔhene antumi anka n’ani angu so.+ Enti ɔsoma ma wɔkɔfaa wɔn bere so nsɛm nhoma+ no bae. Ɛnna wɔkenkan no ɔhene anim. 2 Wohui sɛ wɔakyerɛw pɔw a Bigtana ne Teres a wɔyɛ ahemfie mpanyimfo+ a wɔhwɛ pon ano no bɔe sɛ wobekum Ɔhene Ahasweros a Mordekai bɛkaa+ ho asɛm no wom. 3 Ɛnna ɔhene bisae sɛ: “Dɛn na yɛayɛ de ahyɛ Mordekai anuonyam, na ade kɛse bɛn na yɛayɛ ama no?” Ɛnna nhenkwaa a wɔsom no no kae sɛ: “Yɛnyɛɛ hwee mmaa no.”+ 4 Akyiri yi ɔhene bisae sɛ: “Hena na ɔwɔ adiwo hɔ?” Saa bere no na Haman aba ahemfie no adiwo+ hɔ rebɛka akyerɛ ɔhene sɛ ɔnsɛn Mordekai wɔ dua+ a wayɛ ama no no so. 5 Nhenkwaa no kae sɛ: “Haman+ na ɔwɔ adiwo hɔ.” Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Momma ɔmmra mu.” 6 Bere a Haman hyɛn hɔ no, ɔhene bisaa no sɛ: “Ɛdɛn na wɔnyɛ mma ɔbarima a ɔhene pɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam?”+ Ɛnna Haman kae ne komam sɛ: “Hena koraa na ɔhene bɛpɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam sen me?”+ 7 Enti Haman ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Ɔbarima a ɔhene pɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam no, 8 ma wɔmfa ahentade+ a ɔhene ankasa hyɛ ne ɔpɔnkɔ a ɔhene tena so+ a wɔde ahemmotiri abɔ ne ti mmra. 9 Na wɔmfa atade no ne ɔpɔnkɔ no nhyɛ mmapɔmma atitiriw no biako nsa.+ Afei wɔmfa atade no nhyɛ ɔbarima a ɔhene pɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam no na wɔmfa no ntena ɔpɔnkɔ no so mfa kurow+ no mmɔnten+ so na wɔnka nni n’anim sɛ, ‘Sɛnea wɔyɛ ɔbarima a ɔhene pɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam ni.’”+ 10 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Haman sɛ: “Yɛ no ntɛm, fa atade ne ɔpɔnkɔ no na yɛ sɛnea woaka no ma Yudani Mordekai a ɔte ɔhene pon ano no. Nea woaka nyinaa yɛ, mma biribiara nnka mu.”+ 11 Afei Haman faa atade+ ne ɔpɔnkɔ no, na ɔde hyɛɛ Mordekai+ de no tenaa ɔpɔnkɔ so faa kurow no mmɔnten+ so ka dii n’anim+ sɛ: “Sɛnea wɔyɛ ɔbarima a ɔhene pɛ sɛ ɔhyɛ no anuonyam ni.”+ 12 Eyi akyi no, Mordekai san kɔɔ ɔhene pon no ano.+ Haman de, ɔkataa ne ti yɛɛ ntɛm de awerɛhow kɔɔ ne fie.+ 13 Haman kaa nea ato no nyinaa kyerɛɛ ne yere Seres+ ne ne nnamfo nyinaa. Afei n’anyansafo+ ne ne yere Seres ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ Mordekai a woafi ase redi nkogu wɔ n’anim yi yɛ Yudafo aseni a, ɛnde wuntumi nni no so ɔkwan biara so, mmom woyɛ dɛn ara a wobɛhwe ase n’anim.”+ 14 Bere a wogu so ne no rekasa no, ɔhene mpanyimfo bae na wɔyɛɛ ntɛm+ de Haman kɔɔ pon+ a Ester atow no ase.